ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအရုပ်ဆိုးအမှန်တရား
ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့, ကျနော်တို့အကောင်း ol တွင်နေထိုင်မရှိတော့’ ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာမေတ္တာကိုတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာမှဦးဆောင်သောပိုးပန်းသို့လှည့်အဘယ်မှာရှိလက်ထက်, ရှည်စွာသောမင်္ဂလာဆောင်. နည်းပညာ၏တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ, ကတိကဝတ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း, နှင့်ဖောက်ပြန်၏နှုန်းမြင့်မား, ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့မလွယ်ကူပေ. ထိုအခါနှောင်းပိုင်း 20 ရာစုတွင်ဖွားမြင်သောသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ရုံမည်မျှခက်ခဲသိ.
ဒီထက်ဂရုစိုကျသူဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုပါဝါရှိပြီးကြောင်းပဲလွန်းအားနည်းချက်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကပိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးသူတဦးတည်းဖြစ်ဖို့လိုလား. ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်အားထက်သန်ပေါ်လာချင်ကြဘူးသောကြောင့်, ကျွန်တော်နောက်ကျောပို့ရန်နာရီသို့မဟုတ်တခါတရံတွင်လက်ထက်ယူလေ့. ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းမည်သူမဆိုများအတွက်ပျော်စရာမဟုတ်ပါ.
ရှေ့ဆက်စီစဉ်နေကြောင်းနှင့်နေ့ရက် setting ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမလေ့ရှိတယ်. လူမှုမီဒီယာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အခြားရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားကို, နှင့်မိတ်ဆွေများ, ရက်စွဲများထောက်ထားစာနာထွက်စီစဉ်ထားထက်အခိုက်များပိုမိုစွယ်ဖြစ်လေ့.
တူတိုများ “ရှောရဲ့ရေခဲသေတ္တာတွင်” နှင့် “ထွက်ဆွဲထားချင်တယ်” အဘို့အ code တွေဖြစ်ပါတယ် “ရဲ့တက်ချိတ်ပါစေနှင့်”. ဆုံးနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှအဲဒီမက်ဆေ့ခ်ျများလာပြီနေစဉ်, သူတို့အဖန်ဖန်ဒီရက်အချိန်ဖြုန်းဖို့သူတစ်ဦးဦးကိုဖိတ်ခေါ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု.
အချို့လူများကဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်, သူတို့့ကိုတက်ချိတ်ချင်တယ်. ကံမကောင်းစွာပဲ, ထိုအချိန်ကာလ၏အများစုသည်ဤအချက်ကိုပြီးနောက်သည်အထိမပြောဆို. အခုနောက်ပိုင်း, ရိုးသားစွာအလွန်ခဲယဉ်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်.
လူအတော်များများမှဦးဆောင်သောကတိကဝတ်ကြောက်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် “ကျနော်တို့ပြောနေတာင်” ဆက်ဆံရေးကို. မသာဒီမှုန်ဝါးလိုင်းများကိုမ, အဲဒီဆက်ဆံရေးကိုကြာရှည်ဘယ်တော့မှမလေ့. ဤတံဆိပ်ကပ်-အခမဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဖန်ဖန်ကိုလိမ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးထို့နောက် cheat တာဝန်ရှိသူတဦးကဘယ်တော့မှကတည်းက “တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘယ်တော့မှမ”.
လူမှုမီဒီယာသွေးဆောင်မှုများနှင့်လွှဲရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏. ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆက် cheat အဘို့အခွင့်အလမ်းတိုးပွါးတစ်ဦးပုံကို like နှိပ်အဖြစ်ပရောပရည်ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်သိမ်မွေ့သော. လူမှုမီဒီယာလည်းထွက်ရှိပါတယ်တခြားဘယ်သူကြည့်ဖို့အတွက်ရွေးစရာပြသ, ကမရှိတော့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ထိတွေ့နေဖို့ပဲတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ. လူမှုမီဒီယာစခံစားချက်တွေကိုရန်အသုံးပြုသည်. status updates များနှင့်မေတ္တာအကြောင်း posted ပုံများ, ကိုတိုက်ရိုက်သင် ဖော်ပြ. မနေစဉ်, သူများထုတ်ဖော်ပြောဆိုသစ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်’ စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကို.
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီနေ့ခေတ်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုလုံးဝ unfiltered ကြည့်ရှုရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, လူစစ်မှန်သောဖြစ်နှင့်ပင်ဆက်ဆံရေးကိုရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့အထဲကထားရန်ကြောက်ပါတယ်များမှာ. သူတို့သည်လည်းရရှိနိုင်အဖြစ်ရောင်ပြန်ဟပ်စေလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ scared ခံရဒီအယူအဆဖြစ်ပါသည်, အရမ်းစိုးရိမ်, လွန်း dorky, အရမ်းသဘောကောင်း, အရမ်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ, လုံလောက်တဲ့ရယ်စရာမ, စသည်တို့ကို. အဘယ်အရာကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိရန်လိုအပ်သင်သည်လက်ျာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုတွေ့သောအခါခြင်းဖြစ်သည်, သူတို့သင်တို့ရှိသမျှကိုရှုထောင့်ပွေ့ဖက်ကြမည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်နှင့်အတူရင်ခုန်စရာရမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်မည်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာသင်တက်ချိုးမည် – ဤအဖြစ်ရပ်မှန်များနှစ်ခုစလုံးခွောကျတတျသောနေကြတယ်. ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့အလွယ်ကူဆုံးမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ဒါကြောင့်အဆုံး၌ထိုက်သည်. ကျနော်တို့ကအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေလုပ်ဆောင်သောအခါ, စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့ဖို့ခရီးစဉ်ထိုက်သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည် သာ. မြတ်နိုးလေ့.